Momba anay - OYE SHOWCASE CORPORATION voafetra
Raharaha fampisehoana antsinjarany
Tranga fampisehoana firavaka
Tranga fampirantiana tranombakoka
Asehoy ny tranga ho an'ny Collectibles
Tranga fampisehoana amboara
Asehoy ny vaovaon'ny kabinetra
OYE SHOWCASE CORPORATION voafetra
Fiheverana amin'ny antsipiriany & fanavaozana maharitra
Ny vokatra fisehosehoana noforonin'ny andiana mpamolavola mandroso sy ny tantara amin'ny endriny, ny fitaovana famokarana mandroso dia mahatonga ny fahafaha-mamokatra ho matanjaka be, ary ny rafitra fitantanana famokarana henjana dia miantoka ny kalitaon'ny vokatra.
Ny fandefasana haingana dia mampihena be ny tsingerin'ny fivarotana ary ny tombony ara-materialy dia mahatonga ny vidiny ho ara-drariny sy azo zakaina mba hampitomboana ny fifanarahana ho an'ny mpanjifa.
Nanangona ekipa ekipa mpamokatra za-draharaha sy mahay izahay, ary mifikitra hatrany amin'ny toe-tsain'ny mpisava lalana sy tsy mandray anjara amin'ny fomba vaovao, ary miezaka ny hanana famokarana tsara amin'ny famokarana.
Ny OYE SHOWCAES CORPORATION LIMITED dia natao manokana amin'ny famokarana fitaovam-pivarotana, fivarotana, fampirantiana ary entana manokana ho an'ireo mpivarotra ambongadiny, mpivarotra ambongadiny, mpanafatra. Niara-niasa tamin'ny mpanjifa mihoatra ny 110 izahay izay avy any Eropa, USA, Australia ary Amerika atsimo.
Ary niara-niasa tamin'ny marika malaza eran'izao tontolo izao izahay, toa an'i Triumph, MauiJim, Bulova, Tiffany, Charlotte Tibury, Citizen, Raymond Weil ect Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny 13 taona mahery, nahazo traikefa manan-karena tamin'ny varotra sy serivisy aorian'ny fivarotana izahay. mamorona tokana fivarotana tokana ary manolotra fampisehoana anao manokana. Ento fotsiny ny eritreritrao na ny sary, avelao isika hanao ny ambiny. Hanara-maso ny zava-drehetra izahay manomboka amin'ny famolavolana, famokarana, fanandramana hatramin'ny fandefasana.
Mametraha baiko anio, dia halefanay ho any aminao mandritra ny 30 andro izany.
Firenena / Faritra Guangdong, Sina
Haben'ny orinasa 5.000-10.000 metatra toradroa
Vokatra lehibe fampirantiana, fampitaovana fivarotana, fipetrahana, kaontera fitaratra
Famokarana fifanarahana OEM Serivisy atolotra
Mpiasa tanteraka 51 - 100 ny olona
Laharana famokarana 5
Vola isan-taona 2,5 tapitrisa dolara amerikana - 5 tapitrisa dolara amerikana
Taona napetraka 2017
Markets lehibe Eoropa Avaratra 18,00%
Amerika Avaratra 15,00%
Ny fampirantiana fitaratra misy antsika dia tsara raha asehoy ny fantsom-pifohana sy ny etona. Ny mpanjifa dia manambatra tsirairay ny kaontera ary mametraka ny vokatra tsara aminy eo amin'ny talantalana ary milaza ny mpanjifa fa "tsara be izany"
Adiresy:No.2 Distrikan'i Qiuxizhonglu Huiyang, Huizhou, Sina